Sir Alex Ferguson: Never Give In (2021) – Link2| MM Movie Store
Sir Alex Ferguson: Never Give In (2021) – Link 2
IMDb Rating- 8.6/10
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖန်တွေဘာကြောင့် ဒီလောက်ရဲရတာလဲ…ဆိုပြီး ၁၉ သင်းဖန်တွေအနေနဲ့ ဒွိဟဖြစ်ဖူးကြမှာပါ…တကယ်တော့ Manchester is Red ဖြစ်နေကြတာဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့ အရှုံးမပေးကြေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ မန်ယူခေတ်ကို မှီခဲ့ကြလို့ပါပဲ။“အောင်မြင်မှုဆိုတာ အရှုံးမပေးတာကနေအစပြုပါတယ်…”ဖာဂူဆန်ဟာ ဉုံဖွဆိုပြီး အောင်မြင်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ အတက်အကျဆိုတာ ရှိစမြဲပဲမဟုတ်လား..
အဲ့လိုပဲ ဖာဂူဆန်အနေနဲ့ ဘောလုံးလောကမှာ ဆာအဲလက်စ်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခု မရလာခင်ဘာသာရေး၊ နည်းပြမှု၊ ကစားသမားဆက်ဆံရေးစတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခက်အခဲတွေကို လုံးဝအရှုံး မပေးဘဲ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံကို Interview, Flashback ပုံစံနဲ့ဖာဂူဆန်ရဲ့သား ဂျေဆင်ဖာဂူဆန်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားတာပါ။The rest is history and You know who he is.
WEST BROMWICH, ENGLAND – MAY 19: Manchester United manager Sir Alex Ferguson applauds the crowd after his 1,500th and final match in charge of the club following the Barclays Premier League match between West Bromwich Albion and Manchester United at The Hawthorns on May 19, 2013 in West Bromwich, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)
The Penthouse 3: The Beginning of the End – Link 1
Lionel Messi The Greatest(2020)
The Box (2021) – Link 1
Princess Sakura – Link 1
The Magicians – Season2(Episode 2)
Special Yua Mikami 2021 – Link 2
Total Domain Yua Mikami – Link 4